Dhakhaatiirta oo sheegay finan iyo boogo maqaarka lagu arko oo calaamad u noqon kara cudurka…. – Bandhiga
Boogo, barar iyo finan furuuruca oo kale ah oo uu maqaarka qofku yeesho ayaa ah calaamado ka xoog badan qufaca iyo xumadda oo lagu garan karo in qofku uu qabo Coronavirus. Xeeldheereyaal ka tirsan kuliyadda Kings college ee magaalada London ayaa baadhitaanno ay sameeyeen ku ogaaday in xaaladahan lagu arko boqolkiiba 9 ka mid ah bukaanka COVID-19, sidaas awgeed waxa ay in si rasmi ah loogu daro calaamadaha ay xeeldheereyaasha caafimaadku u aqoonsan yihiin Fayraska.
Xeeldheereyaasha ogaaday in xanuun maqaarka ahi uu ka mid yahay calaamadaha Coronavirus iyo xaaladaha uu bukaanka ku keeno, ayaa baadhistooda oo ay sii wadeen waxa ay xaddideen siddeed nooc oo ka mid ah xanuunnada maqaarka, oo lagu garan karo in qofku uu qabo Coronavirus.
Xaaladahan ayaa ah kuwo aan u gaar ahayn Coronavirus ka balse ay xanuun u eeg ama la mid ah xanuuno hore loogu yaqaannay maqaarka, sidaas awgeed waxa ay marar badan keeni kartaa jaahwareer uu dhakhtarku isku qaldo in xanuunkani uu yahay mid sidiisa u madaxbannaan oo ka mid ah xanuunnadaas la yaqaannay iyo in uu yahay raad ka dhashay Coronavirus.
Siddeeda nooc ee xaaladaha maqaarka uu Coronavirus ku keeno, ayaa ku soo ururaya in ay yihiin finan yaryar oo fururuc ah, finan waaweyn, barar, boogo casaan ama madow ah, dhiigroor daran, ama jidhka oo boogo gubasho oo kale ah yeesha.
Cilmibaadhayaasha arrintan ogaaday oo la shaqaynayey Iskaashatada dhakhaatiirta maqaarka ee dalka Ingiriiska ayaa ururiyey 400 oo sawir oo muujinaya boogaha maqaarka ka soo baxa ee Fayraska Coronavirus ku lammaan, kaddib markii ay la kulmeen kumannaan tusaale oo muujinaya jiritaanka xaaladdan. Sawirradaas oo muujinaya in xaaladdan inta badan lagu arko gacmaha oo ka bilowda faraha dhexdooda, faraha dushooda, baabacooyinka gacmaha dhabarkooda, jiqillada, cagaha qaybtooda sare, gaar ahaan faraha dushooda, dhudhunka lugta qaybtiisa eeda dambe ee muruqa leh, jilbaha, jilbaha laabatadooda dambe, laabta / shafka, dhabarka oo qaarka dambe u badan, raqabadda, indhaha dushooda, kilinkillooyinka, afka gudihiisa iyo debnaha. Boogahan iyo finankan ayaa leh xanuun badan, cuncun iyo kaar mararka qaarkood sida gubashada oo kale ah.
Baadhitaannada ay xeeldheereyaashani sameeyeen ayaa muujinaya in xaaladahan lagu arki karo guud ahaan dadka u uku dhaco Fayrasku da’ kasta oo ay yihiin ama si kasta oo ay xaaladdooda caafimaad tahay, laakiin sida ay khubaradu qireen waxa ay si gaar ah ugu badan yihiin carruurta, iyada oo marmarka qaarkood laga yaabo in aan wax calaamad ah oo kale lagu arkin.
Haddaba Coronavirus oo calaamadihiisu hore u ahaayeen qufac qallalan, xumad daran, cabbudh, neefta oo la qawado iyo dhadhanka iyo urta oo qofka ka taga, waxaa hadda kaddib ku soo biiraya in qofka lagu arko dhibaato dhinaca maqaarka ah.